Abakhi be-Cast Iron Enamel Fry Pan Factory - Abakhiqizi baseChina i-Iron Enamel Fry Pan, Abahlinzeki
Imininingwane Yomkhiqizo: JT101, JT102 Material: ubukhulu be-Enamel: DIA: 25 * 5 izin26 * 5.5 Ukupakisha: I-Carton Material: iron iron ne-koqweqwe lwangaphakathi ngaphakathi. Insimbi ephonswayo ibamba ukushisa kahle futhi ilungele ukugoba ubukhali. Ukuhlanganiswa kwe-koqweqwe lwawo kuqinisekisa umphumela onganamatheli. Zilungele abapheki abangenisayo: i-pan ye-grill ingasetshenziswa kuzo zonke izinhlobo zabapheki, kufaka phakathi nokungeniswa. Ukumelana nokushisa: kungasetshenziswa kuhhavini naku-hlupha ngaphandle kwezinkinga. Ama-grooves angezansi kwephaneli aqinisekisa ukuthi amanoni ayaphuma futhi ...
Imininingwane Yomkhiqizo: I-HF 87A Material: ubukhulu be-Enamel: DIA: 23 * 23CM Ukupakisha: I-Carton Material: iron iron nge-koqweqwe lwangaphakathi ngaphakathi. Insimbi ephonswayo ibamba ukushisa kahle futhi ilungele ukugoba ubukhali. Ukuhlanganiswa kwe-koqweqwe lwawo kuqinisekisa umphumela onganamatheli. Zilungele abapheki abangenisayo: i-pan ye-grill ingasetshenziswa kuzo zonke izinhlobo zabapheki, kufaka phakathi nokungeniswa. Ukumelana nokushisa: kungasetshenziswa kuhhavini naku-hlupha ngaphandle kwezinkinga. Imifantu engaphansi kwephaneli iqinisekisa ukuthi amanoni ayaphela futhi nenyama ha ...
Imininingwane Yomkhiqizo: I-JT Material: ubukhulu be-Enamel: DIA: 33.3 * 21.8 * 3.2 Ukupakisha: I-Carton Material: iron iron nge-koqweqwe lwangaphakathi ngaphakathi. Insimbi ephonswayo ibamba ukushisa kahle futhi ilungele ukugoba ubukhali. Ukuhlanganiswa kwe-koqweqwe lwawo kuqinisekisa umphumela onganamatheli. Zilungele abapheki abangenisayo: i-pan ye-grill ingasetshenziswa kuzo zonke izinhlobo zabapheki, kufaka phakathi nokungeniswa. Ukumelana nokushisa: kungasetshenziswa kuhhavini naku-hlupha ngaphandle kwezinkinga. Ama-grooves angezansi kwephanele aqinisekisa ukuthi amanoni ayaphuma futhi nenyama ...
Imininingwane Yomkhiqizo: HF70A, HF 71A Material: Usayizi we-Enamel: DIA: 6.5CM, DIA: 8 CM Packing: I-Carton Material: iron iron nge koqweqwe lwangaphakathi ngaphakathi. Insimbi ephonswayo ibamba ukushisa kahle futhi ilungele ukugoba ubukhali. Ukuhlanganiswa kwe-koqweqwe lwawo kuqinisekisa umphumela onganamatheli. Zilungele abapheki abangenisayo: i-pan ye-grill ingasetshenziswa kuzo zonke izinhlobo zabapheki, kufaka phakathi nokungeniswa. Ukumelana nokushisa: kungasetshenziswa kuhhavini naku-hlupha ngaphandle kwezinkinga. Ama-grooves angezansi kwephaneli aqinisekisa ukuthi kukhiqizwa amanoni ...
Phonsa i-Iron Fry Pan
Item cast iron koqweqwe lwawo u-fry pan Item No HF2727 Usayizi Dia.27cm Ukuhlanganisa i-enamel opisha i-MOQ 500Pcs 1.Heavy-task enamel coating 2.Superior ukushiswa kokushisa kanye nokugcinwa kwe-3.Cast heats he slowly slowly and even ngokulinganayo 4.Perfect for slowlyl ukupheka Izici: 10.5 -inch i-iron-cast engafakwanga i-Frying Pan Skillet yokubhaka, ukukhotha, ukugaya, nokuningi; Ukugeza izandla nokugeza izitsha okuphephile ngeke kusabele ngokuphephile okulula, i-PFOA- ne-PTFE yamahhala ye-porcelain enophahla enhle yokuthunga, ukuthosa ...